Maqal: Ustaad Cabdixakiim Max’ed iyo Wariye Lagu Aasay Muqdisho. – SBC
Maqal: Ustaad Cabdixakiim Max’ed iyo Wariye Lagu Aasay Muqdisho.
Masuuliyiinta Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa maanta si wadajir ah kala qeyb qaatay bahda warfidiyeenka Soomaaliyeed iyo Telefishinka Universal aaska labo weriye oo u kala shaqeynayay telefishinka universal iyo Warbaahinta SBC kuwaasoo ku geeriyooday falkii argagixiso ee ka dhacay Hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Ururka SuxufiyiintaSoomaaliyeed ayaa cambaareeyay falka naxariis darada ee lagu dilay Marxuum Maxamed Cabdikarim Macalim oo u shaqeynayay telefishinka Universal iyo Ustaad Cabdixakim Maxamed Cumar oo ku geeriyooday qarax bambaano oo shalay ka dhacay banaanka Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho, halka weriye Salmaan Saciid uu dhaawac wejiga iyo gacanta bidix ka soo gaaray, haatana lagu dabiibayo isbitalka Madiina ee Muqdisho.
Marxuum Maxamed Cabdikarim ayaa Muqdisho ku sugnaa muddo todobaad ah, sida uu noo xaqiijiyay Agaasimaha Bariga Africa ee Telefishinka Universal, Cabdullahi Xersi, waxaana marka shilku ku dhacay isaga iyo Salmaan Saciid ay garoonka ka dooneen weriye Cabdixakiim Maxamed Cumar oo markii ay garoonka soo laabtay masiibada kula dhacday markii ay marayeen agagaarka hotelka Jazeera.
Masuuliyiinta Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa maanta si wadajir ah kala qeyb qaatay bahda warfidiyeenka Soomaaliyeed iyo Telefishinka Universal aaska labo weriye oo u kala shaqeynayay telefishinka universal iyo Idaacadda SBC kuwaasoo ku geeriyooday falkii argagixiso ee ka dhacay Hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee, labada marxuum ayaa ka tegay xaasas iyo caruur.
Hoos ka dhageyso warbixinta Aaska: